Feeryahan Evan Holyfiled: Wada-hawlgalaha Fayo-qabka Cusub Touts Faa'iidooyinka CBD
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Feeryahan Evan Holyfiled: Wada-hawlgalaha Fayo-qabka Cusub Touts Faa'iidooyinka CBD
Evan Holyfield oo caan ku ah feerka ayaa ku dadaalaya inay wacyi -gelin u keento faa'iidooyinka caafimaadka iyo fayoobaanta ee CBD oo leh shirkad magaalo.
Shirkadda Georgia Hemp Company waxay ku dhawaaqday iskaashi ay la leedahay feeryahankii miisaanka dhexe, Evan “Yung Holy” Holyfield, isaga oo ugu magac daray hab -nololeedka cusub iyo lammaanaha fayoobaanta ee shirkadda. Iskaashigan la leh Holyfield wuxuu ku soo beegmayaa xilli muhiim u ah xirfadiisa isagoo isku diyaarinaya dagaalkiisa xiga Oktoobar 23-keeda isagoo rajaynaya inuu hagaajiyo rikoorkiisa xirfadeed ee aan laga adkaan 8-0.
“Shirkadda Hemp Georgia waxay ku faraxsan tahay inay iskaashi la yeelato Holyfield iyo kooxdiisaba si aan u sii wadno dadaalladayada heer sare ah,” ayuu yiri Joe Salome, oo ah Maareeyaha Iskaashatada Shirkadda Georgia Hemp Company. “TGHC iyo kooxda Holyfield waxay caddeeyaan inay yihiin ciyaar ku habboon adduunka suuqgeynta isboortiga ee maanta iyo tusaale cajiib ah oo ah cayaaryahan casri ah oo maanta la shuraakoobay astaan ​​la garan karo iyo xariiqda wax -soo -saarka saamaynta leh. Kuwani waa shuraakada aasaaska u ah iskaashiga cayaaraha mustaqbalka. 23 -ka Oktoobar waa bilow. ”
Wiilkii feedhyahanka halyeeyga ahaa, Evander Holyfield, Evan wuxuu aad u danaynayey booska CBD ee sii kordhaya wuxuuna ku tijaabinayay hababka soo kabashada ee caawin kara isaga iyo cayaartoyda kale ee adduunka. Iskaashiga cusub, Holyfield wuxuu faallo ka bixiyay, “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la shaqeeyo Shirkadda The Georgia Hemp Company. Kaliya maahan inay yihiin kuwa maxalliga ah magaaladayda Atlanta, laakiin sidii cayaaryahan ahaan, aad bay muhiim iigu tahay inaan adeegsanayo alaabo dabiici ah oo iga caawin doona inaan mustaqbalkeyga gaadhsiiyo heerka xiga. Waxaan rajeynayaa in iskaashigayagu uu kor u qaadi doono faa'iidooyinka caafimaad ee CBD - ma aha oo kaliya ciyaartooyda, laakiin qof walba - iyo sida ay gacan uga geysan karto geeddi -socodka soo -kabashada iyo fayoobaanta guud. "
"Wada -shaqayntani waxay gacan ka geysaneysaa in fiiro gaar ah loo yeesho waxa CBD u qaban karto jirka iyo wax ka qabashada fayoobaanta dhinac diyaarinta iyo ka -hortagga," ayuu sharraxay Ryan Dills, oo ah Maareeyaha Wada -shaqaynta Shirkadda Georgia Hemp Company. "Waxaan rajeyneynaa inaan la imaanno xoogaa is -waafajin ah hababka soo -kabashada iyo dib -u -dhiska kuwaas oo lagama maarmaan u ah isboortiga saamaynta/dagaalka."